Delete iPhone Data hor Iibinta
Maxaad u baahan tahay si ay u tirtiri iPhone hor iibin
Your iPhone waxaa ku jira macluumaadkaaga shakhsiyeed, sida lambarada telefoonka, lambarada telefoonada ee qoyskaaga, cinwaanka email, xisaabta bangiga, ID Apple, sawiro, videos, emails iyo in ka badan. Haddii aad iibiso la macluumaadkaaga shakhsiyeed, marna ma ogaan kartid oo aad telefoonka iyo macluumaad shakhsi ah gacanta ku dhici doona galay. Haddii aad la kulanto xatooyo aqoonsiga, waa hubaal, waxa aad helaysaa in ay lumiyaan wax. Si looga fogaado wax xun ay kugu dhacaan, waa in aad la masixi aad iPhone ka hor inta aanad ka iibinaynin.
Sidee in ay tirtirto xogta iPhone ka hor iibin
Jir kaabta aad iPhone hore: Ka hor inta la tirtiro xogta iPhone hore, hubi in aad kor u xog ah in aad doonaysid in aad sii taageeray, maxaa yeelay, tirtirka aad u socoto inaad qabato waa mid joogto ah. Qofna ma soo kaban karto, wixii xog ah ka leh software kabashada kasta. Kaliya sidan gaarka ah si ammaan ah badbaadin karaa. Waxaad isticmaali kartaa Lugood ama iCloud in gurmad xogta ku saabsan jir iPhone, ama si toos ah u wareejiyo si aad telefoon cusub oo la qalab kala iibsiga xogta qaarkood sida Wondershare TunesGo (haddii aad weli dooran iPhone cusub) ama Wondershare MobileGo for Android (haddii aad telefoonka waa Android ah mid ka mid ah).
Delete xog ku saabsan iPhone ee iibinta: Hadda, waxa aad bilaabi kartaa tirka dhammaan xogta ku saabsan jir iPhone. Si loo hubiyo in xogta la tirtiray oo aan la soo kabsaday karaa iyadoo wax software kabashada xogta, waxaad u baahan tahay inaad doorato aalad lagu kalsoonaan karo oo ku dhameysan kara shaqadan dhammaataan oo sooma aan xusuusan doono wixii xog ah ahaantiisa. Waxaa jira dhowr barnaamijyadooda tirtire xogta iPhone on suuqa, laakiin dhammaan oo ka mid ah xogta tirtirin karaa gebi ahaanba. Waxay nadiifin kartaa oo kaliya xogta ay ka buuga u gaar ah. Sida ugu ammaan waxaa la isticmaalayo software PC-dhamaadka. Waxaa mar walba kara shaqada nadiifinta wanaagsan. Halkan aan soo jeediyo waa Wondershare SafeEraser ee macruufka ama Wondershare SafeEraser u Mac . Software Tani yareyso karo wax walba iPhone, iyo xitaa xarunta soo kabashada dowladda aan dib u soo ceshano karaa wax ka on. Waxaa gebi ahaanba ammaan iyo fududahay in la isticmaalo.
Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare on your computer. Waxaa Launch iyo xirmaan your computer aad iPhone via cable USB ah. Marka xiran si guul ah, waxaad ka arki kartaa magacaaga iPohne u muuqataa ee dhanka bidix ee sare ee barnaamijka
Tallaabada 2 masixi iPhone inay iska iibiso
In galeeysid bidix, guji "masixi All Data '. Doorashadan waxa masixi doono dhammaan macluumaadka, sida Messages, Call History, Facetime, Xiriirada, Mail, Calendar, Xusuusin, Notes, Voice Deymaha maqan, Safari Bookmarks, Photos, Videos, iyo in ka badan oo ku saabsan iPhone. Dhinaca midig, nooca 'tirtirto' si loo xaqiijiyo Kabcada_.
Tallaabada 3 Calan Your iPhone sidii mid cusub
Inta lagu guda jiro geeddi-socodka tirtira aad iPhone, fadlan aad iPhone xiran your computer. Dulqaad in aynu barnaamijka ku dhameysan Kabcada_ aad u. Waxaad si fiican ma guji lahaa badhanka 'Stop' si loo hubiyo in dhammaan xogta ku saabsan iPhone masaxayo.
Delete iPhone Data u Iibinta Video Tutorial
> Resource > iPhone > Sida loo Delete iPhone Data Ka hor inta Iibinta